कतारमा पिसिआर परिक्षणको शुल्क घट्याे, हेर्नुस कति छ शुल्क ? - Thulo khabar
कतारमा पिसिआर परिक्षणको शुल्क घट्याे, हेर्नुस कति छ शुल्क ?
दोहा : कतार सरकारले को’भिड-१९ का लागि गरिने पिसिआर परिक्षणको शुल्क घटाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्टोबर ६ देखि लागू हुनेगरी आज जारी गरेको परि’मार्जित यात्रा नीति अनुसार अब पिसिआर परि’क्षणको शुल्क १६० रियाल मात्र लाग्नेछ ।
यसअघि उक्त परिक्षणको शुल्क तीन सय रियाल थियो । यद्यपि निजि अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा कम शुल्कमा परिक्षण गर्दै आइरहेको थियो । त्यस्तै र्या’पीड एन्टि’जेन र सेरोलोजी एन्टि’बडी परिक्षणको शुल्क पनि ५०/५० रियाल तोकिएको छ ।
सरकारले शर्त अनुसार मान्यता दिएको खोप लगाएका यात्रुले कतार आउनुअघी र आइसकेपछि सेरोलोजी एन्टिबडी परिक्षण गर्नुपर्नेछ । सिनोफार्म,सिनो’भ्याक र स्पुत’निक भि खोप कतार सरकारले शर्त अनुसार मान्यता दिएको खोप हो ।
जर्मनी र बेलायती वैज्ञानिकलाई यस वर्षको रसायनशास्त्रको नोबेल पुरस्कार
काठमाडौं : जर्मनीका बेन्जामिन लिस्ट र बेलायतका डेभिड डब्ल्यूसी म्याकमिलानले यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार संयुक्तरुपमा पाएका छन् ।
नोबेल पुरस्कार कमिटिले उनीहरुलाई अणु बनाउने नयाँ तरिकाको विकास गरेकोमा नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरको हो ।
नयाँ तरिकाले औ’षधि क्षेत्रमा अनुस’न्धानको लागि पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । यसअघि नै चिकित्साशास्त्र र भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार घोषणा भइसकेको छ ।